February 2014 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin February 27, 20146Comments
ဒီလိုနဲ့ပဲ ၂၀၁၄ တစ်နှစ်အတွက် နှစ်လဆိုတဲ့ အချိန်ကတော့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပါပြီ ...။ ဒီတစ်နှစ်အတွင်း...ရေးဖြစ်နေတာတွေက ပြောခဲ့ဖူးသလို ခံစားမိသမျှ ချရေးနေတဲ့ သံတူကြောင်းကွဲ ပုံစံတူတွေ များနေတယ်...။ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ ရေးဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် .. အိုင်ဒီယာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် ရေးဖို့အချိန်ကမရ၊ ရေးဖို့အချိန်ရှိလာတော့လည်း အိုင်ဒီယာတွေက ပျောက်ကုန်နဲ့ ဒီလိုနဲ့ ဒီတစ်နှစ်တော့ ရေးချင်ရာရေးတဲ့ပို့စ်တွေပဲ များနေမယ်ထင်ပါရဲ့.....။ ရေးသမျှကတော့ ဒီစကားလုံးတွေပဲ ရှေ့ပြန်နောက်ပြန်နဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်သုံးနေမိပြန်တယ် ..။
ဒါပေမယ့် တလောတုန်းက ၂၀၁၄ မှာ အကောင်အထည်ဖော်မယ့် အိပ်မက်တွေကို ချရေးထားဖူးတယ် ..။ အဲဒီအိပ်မက်တွေထဲက တချို့တလေကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်နေတယ် ..။ အထူးသဖြင့် လူမှုရေး ..နောက်ပြီးတော့ blog မှာ တစ်လကို ပို့စ်လေးခုရေးဖြစ်အောင် ရေးမယ်ဆိုတာ လည်း တကယ်လုပ်ဖြစ်အောင်လို့ မနက်ဖြန်လကုန်ရက်မတိုင်ခင် ဒီနေ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရေးနေပါတယ် ..။
လူမှုရေးကတော့ဟိုးအရင်ကထက်စာရင် တော်တော်ကို ဖော်ရွေသဘောကောင်းလာပြီး ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်လာပြီ ..။ အရင်ကဆိုရင် ကျမက တော်တော်အနေအေးတဲ့သူတစ်ယောက်၊ စကားနည်းတဲ့သူ၊ လူကြောက်တတ်ပြီး၊ လူတောမတိုးရဲ၊ အားနာတတ်တဲ့သူမျိုး ..။ အခုတော့လည်း ဆန့်ကျင်ဖက်လိုများ ဖြစ်သွားသလားမပြောတတ်တော့ပါဘူး။ ကြောက်တတ်တာဆိုလို့ သိပ်မရှိတော့သလိုပဲ ..။ စကားတွေလည်း တော်တော်ကို လူရည်လည်အောင် ပြောတတ်လာပြီ ..။ ပိုပြီး တိုးတက်လာတာက လူအများကြီးရှေ့မှာ ကြောက်ဒူးမတုန်ပဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြောလာနိုင်တာပါပဲ ..။ အရင်ကတော့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်တိုင်သာ နားလည်ပေမယ့် လူအများရှေ့ထွက်ပြောရမှာ ကြောက်တတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်လေ..။ အတွေ့အကြုံက သင်သွားပေးတော့လည်း နောက်တော့ အဆင်ပြေလာတာပါပဲ ..။
ခုတလော တရားရစရာတွေနဲ့ တွေ့နေရတယ် ..။ စီနီယာအစ်ကိုတစ်ယောက်က သူတို့ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေစုရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ဖေ့ဘွတ်မှာတင်တော့ အားလုံးလိုလိုကို သိပြီးသားပေမယ့် .. ဘယ်သူတွေမှန်း ငယ်ရုပ်တွေကို မမှတ်မိဘူး ..။ ဓါတ်ပုံက ဘယ်တုန်းက ပုံလဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကပုံတဲ့ ..။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းမှာ သူတို့တစ်တန်းလုံး ပြင်ပသွင်ပြင်တွေ ပြောင်းလဲသွားကြတာများ .. မမှတ်မိလောက်အောင်ပဲ ..။ ဗိုက်ပူခါးတုတ်သူကတုတ်၊ အသားမည်းသူကမည်းသွားနဲ့ .. ငယ်ဘ၀ရဲ့ နုပျိုမှုဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်တက်စဉ် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်တန်းတစ်စားတည်းပါပဲ ..။ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အချင်းချင်း ချစ်ခင်ဖေးမမှုတွေပဲ ရှိခဲ့ကြမှာပါပဲ ..။ အချိန်တစ်ခုကို လွန်မြောက်လို့ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ ပြင်ပသွင်ပြင်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ရင်းအခြေခံတွေလည်း ပြောင်းလာကြတယ် ..။ ဘ၀ပေးအခြေအနေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကံတရားပေါ်မူတည်ပြီး ဘ၀အခြေအနေတွေ ကွာခြားသွားကြတယ် ..။ အဲဒီအခါ အနိမ့်အမြင့် မတူညီမှုတွေကြားမှာ ... အားငယ်ချင်စရာ၊ နောင်တရစရာ .. တချို့ကို ထွေးပိုက်မိသူတွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်ပါရဲ့ ..။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါကိုပဲ ဘ၀တို့ လောကဓံတို့ ခေါ်ကြတာပဲ မဟုတ်ပါလား ..။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀ဆိုတာ ပုံသေတွက်လို့ရတဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ ..။ တစ်ချိန်မှာ တူဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေဖြစ်မသွားဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ ..။ အစိုးမရတဲ့ လောကဓံကြားမှာ ... သာပေါင်းညာစား၊ အခြားသူရဲ့ မျက်ရည်ကို ခြေဆေးလို့ ပျော်ရွှင်တတ်သူမဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား ..။
ဘ၀မှာ လူပီသဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားဖို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဟိုးအရင်ကတည်းက သုံးသပ်မိတယ် ..။ “ငါသာ သူ့နေရာမှာဆိုရင်” ဆိုတဲ့ စိတ်ထားလေးတစ်ခုကို ထားတတ်ရင် အရာရာက လှပလာပါလိမ့်မယ် ..။
Phyu Lwin February 17, 20143Comments
အခုတလော သီချင်းတွေ နားမထောင်ဖြစ်တာကြာပြီ ...။ ဟိုအရင်ကတော့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် ကလည်းကောင်း .. စာဖတ်နေရင်းနဲ့ တစ်ယောက်တည်း အပျင်းပြေ youtube က သီချင်းတွေ တစ်ချိန်လုံး ဖွင့်ထားတတ်ပြီး နားထောင်နေတတ်တယ် ..။ ခုတော့ တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ် .. အလုပ်ထဲမှာလည်း သီချင်းနားထောင်ချိန်မရှိလောက်အောင် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို လှုပ်ရှား ..။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပင်ပန်းတာနဲ့ စာတောင်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး ...။ ဒီလိုသာဆို ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်သွားမှာ စိုးမိတယ် ..။ ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်ညှာတယ်ထင်မိတယ် ..။ နည်းနည်းလေးစိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းတာနဲ့ သနားပြီး အနားပေးမိတာပဲ ...။ တကယ်ဆို အဲလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး ..။ ကာယနဲ့အလုပ်လုပ်တာမှ မဟုတ်တာနော် ..။ ခုတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေး တွေကို စာကြည့်တာကနည်းနည်း .. နားတာကများများဖြစ်နေတယ် ...။ အများကြီးပြုပြင်ရဦးမယ် ... ကျမမှာ အဲလိုပျင်းတတ်တဲ့ ပင်ပန်းတတ်တဲ့ အလွန်အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ အကျင့်ဆိုး တစ်ခုရှိတယ် ...။
လျှောက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ phd scholarship တွေက ဧပြီလထဲမှာ deadline က ခပ်များများဖြစ်နေတယ် ..။ ထုံးစံအတိုင်း deadline နီးမှ idea ထွက်တဲ့ ဦးနှောက်က အဲဒီအချိန်ရောက်မှပဲ အပူတပြင်းအသုံးပြုလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးသလို ညဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေက ယေဘူယျအားဖြင့် ပျင်းကြတယ်တဲ့ ..။ အဲဒါမှပဲ ကြိုးစားကြတဲ့ အခြားပုံမှန်လူတွေနဲ့ ရလဒ်က အတူတူဖြစ်သွားပြီး လောကကြီးက မျှမျှတတဖြစ်သွားသတဲ့ ..။ အဲဒီလူ ၂ မျိုးမဟုတ်ဘဲ ညဏ်လည်းကောင်း၊ ကြိုးလည်းကြိုးစားတဲ့သူတွေ ကတော့ အခြားသူတွေထက် အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်လာကြပါသတဲ့ ..။ သေချာတာက ကျမက ညဏ်ကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်ပြီး အလွန်ပျင်းတဲ့သူမျိုး ..။ အထူးသဖြင့် စာလုပ်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့ ..။ အဲဒါကြောင့်လည်း အများထက်ထူးကဲပြီး ထူးချွန်ထက်မြတ်မနေဘဲ .. အများနဲ့တန်းတူ သာမာန်သူလိုကိုယ်လိုပဲဖြစ်နေတာ ....။ ကြုံမိသမျှ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ ကတော့ ကျမကို ကြိုးစားတဲ့သူဆိုပြီး အမြဲပြောဆိုသတ်မှတ်ကြတယ် ..။ ဘာကြောင့် အဲသလို ထင်လေတယ်တော့မသိ ..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ပျင်းလွန်းလို့ မကြိုးစားလွန်းလို့ အမြင်တွေ ကတ်လွန်းလို့ ..။
စိတ်ခံစားချက်၊ အတွေးအခေါ်တွေက နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးပဲ ပြောင်းတတ်သလား၊ အချိန်ကာလကို လိုက်ပြီးပဲ ပြောင်းတတ်သလား၊ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းတတ်လေသလားမသိ ..။ ဒီပြန်ရောက်ကတည်းက သီချင်းတွေ သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ခဲ့တော့ ဟိုအရင်ကလို သီချင်းခံစားမှုအက်ဆေးတွေ မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ ..။ ကဗျာဆိုရင် ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ..။ ကဗျာလို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ့် စကားလုံး တစ်လုံးစနှစ်လုံးစတောင် ခေါင်းထဲက ထွက်မလာတော့ ...။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကဗျာတွေ အများကြီး ရေးချင်မိတယ် ..။ ရေးနေကျပုံစံအတိုင်း ကာရံမဲ့ကဗျာတွေ ..။ နဘေကာရံကဗျာဆိုတာတော့ ဒီတစ်သက်ရေးတတ်ပါ့မလား ယုံကြည်မှုမရှိ ..။ ပါရမီမရှိတဲ့အထဲ ကာရံတွေနောက်လိုက်ပြီး ရေးမိရင် အကြောင်းအရာက ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်တတ်မှာမဟုတ် ...။ ၀တ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရေးဖြစ်အောင် ရေးချင်တယ် ...။ ရေးရင်းနဲ့ အဆုံးမသတ်တတ်မှာလည်း စိုးမိသေးတယ် ..။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက ရေးဖြစ်ခဲ့တာက ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် သံတူကြောင်းကွဲတွေက ခပ်များများရယ် ...။ အချို့သူတွေပြောကြသလို ဘလော့ဂ်ဘက်မှာ ရေးတဲ့သူတွေရော ဖတ်တဲ့သူတွေရော သိသိသာသာလျော့သွားပြီး ဖေ့ဘုတ်ဘက်ကို ရောက်သွားကြပေမယ့် ကျမကတော့ ခုထက်ထိ ဘလော့ဂ်ကို ဖက်တွယ်ထားတုန်း ..။ ရေးချင်လာတဲ့အခါတိုင်း ရေးဖို့အချိန်ရလာတိုင်း ဒီနေရာလေးမှာပဲ ... ရေးချင်သမျှကို ရေးနေမိဆဲ ..။
စကားမစပ် ဆရာမဂျူးရဲ့ လုံးချင်းစာအုပ်အသစ် “ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း” ကို ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ ..။ ကြားထားခဲ့တဲ့အတိုင်း လာဗင်ဒါပန်းခရမ်းရောင်လေးတွေကလည်း ဇာတ်လိုက်အနေနဲ့ ပါတာပေါ့...။ ချစ်စရာ ပန်းခရမ်းရောင်လေးတွေလေ ..။ ဇာတ်လမ်းကိုတော့ မဝေဖန်တော့ပါဘူး ..။ ဆုံနိုင်ရက်နဲ့ ကွဲလေခြင်း ဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ပါ ..။
သီချင်းတွေထဲမှာ ခုတလော အမြဲနားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းက လေးဖြူရဲ့ “စိတ်ပူတယ်” ဆိုတဲ့သီချင်းပါပဲ ..။ သီချင်းစာသားရော သံစဉ်ရောကြိုက်လွန်းလို့ ဖုန်း ringtone လုပ်ထားတော့ ဖုန်းမြည်တိုင်း အဲသီချင်းကို နားထောင်ဖြစ်တယ်..။
♫ ♪..မင်း အဆင်ပြေပါ့မလား စိုးရိမ်တယ်..
မင်းးး ဒီအချိန် တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန် ...
မင်းးးး ချောင်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ငိုနေဦးမလား ...... ..♫ ♪
မင်းးး လိုနေချိန်တိုင်း ရှိချင်တယ် ....
မင်းးးး မလိုရင် ချန်ထားခဲ့နိုင်တယ် ....
မင်းးး အဆင်မပြေမှာပဲ .. စိတ်ပူနေမိတယ် ..♫ ♪ -_- -_- -_-
အချစ်အကြောင်း စကားစမြည် ~~
Phyu Lwin February 16, 20145Comments
တစ်ရက်တော့ လူမှုကွန်ယက်လို့ ခေါ်တဲ့ facebook တစ်ခွင်မှာ ဓါတ်ပုံမျိုးစုံ၊ ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ဖွင့်ဆိုပြနေကြလေရဲ့ ....။ ချစ်သူများနေ့လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှာပေါ့ ...။ အထာပေါင်းစုံနဲ့ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများကလည်း ဆုံးမစကားတွေ မှာတမ်းချွေလား ချွေကြရဲ့ ...။ ၁၅ ရက်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တင်တဲ့ status လိုမျိုးပေါ့ “တော်ပါသေးရဲ့ ၁၅ ရက်နေ့ရောက်လာလို့ .. လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်တဲ့သူဆိုတော့လည်း တနေ့လုံး အသံတောင်မထွက်ရဲဘူး” တဲ့ :D :D ကိုယ်တွေကတော့ ပွဲကြည့်ပရိသတ် ..။ ပရိသတ်လုပ်ရင်းနဲ့ အချစ်အကြောင်းကို တွေးမိတယ် ..။ ကျမသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ဘာလဲပေါ့ ...။ facebook မှာ ဆရာကြီးတစ်ချို့ အထာကြီးနဲ့ ရေးသလို “အချစ်အချစ်ချည်းလုပ်မနေနဲ့ .. ဘုရားတရားလိုက်စားဖို့ .. မိဘကို ပြုစုလုပ်ကျွေးဖို့လည်း သတိရကြဦး” ဘာဘာညာညာ သတိပေးသလိုပေါ့ .. ။ သူတို့တော့ မိဘကို ဘယ်လောက်အလုပ်အကျွေးပြုကြလဲမသိ ... သူတပါးကိုတော့ အဲသလို ဝေဖန်ရေး လေကန်ရေးလုပ်နေကြတာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ..။ တကယ်တော့ ကဏ္ဍတွေက သီးသန့်စီ ..။ လူတိုင်း သူတို့ ခံစားချက်ကို ဖော်ပြဖို့ ရေးသားဖို့ အခွင့်အရေးရှိနေကြတာပဲမဟုတ်လား ..။
ထားပါတော့ ... စကားချည်းတွေကလည်း အများကြီး ... :-) :-)
ကျမရေးချင်တဲ့ အချစ်က သူစိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ချစ်သူတွေကြားမှာရှိတဲ့အချစ် ..။ အချစ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးကြတယ် ..။ ခံစားဖူးကြတယ် ..။ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ် ..။ အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြတယ် ၀မ်းနည်းကြတယ် ..ခံစားချက်မျိုးစုံကို ခံစားဖူးကြတယ် ...။ တကယ်တော့ အချစ်က သူ့ဘာသာအေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်မိတဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခံစားချက်တွေ ပြောင်းလဲသွားတယ် ...။ တချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်း လို့ ဆိုကြတယ် ..။ အချို့ကတော့ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ ..။ ကျမယုံကြည်တဲ့အချစ်ကတော့ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်း ပါပဲ ..။ လူတစ်ယောက်က သူချစ်တဲ့သူကို စွန့်လွှတ်ဖို့တော့ စချစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး ..။ အချစ်ဆိုတာကို ခေါင်းစဉ်မှားတပ်ထားတဲ့ အပျော်ရည်းစားထားတာကလွဲရင်ပေါ့ ..။ တကယ်လို့ စွန့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ အစကတည်းက တွေးမိရင်တော့ အစကတည်းက မချစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ..။ စွန့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုကတည်းက အဲဒါ အချစ်စစ်မဟုတ်လို့ပဲ ..။ သူ့ဘက်က စွန့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်သားရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာသင့်တယ် ..။ ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရတာလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား...။
၀တ္ထုတွေ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာလည်း ခဏခဏကြားဖူးတယ် ..။ “မင်းဘ၀ လှပဖို့ ထွက်သွားရတာ” ဘာညာဘာညာပေါ့ ..။ အဲဒီလိုပြောကတည်းက အဲဒီယောက်ျားလေးက အဖြစ်မရှိတဲ့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူမျိုးလို့ ကျမတော့ သတ်မှတ်တယ် ..။ (p.s ကျမက မိန်းကလေးမို့ မိန်းကလေးဘက်က ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးပြီး ရေးပါမယ်) တကယ်တမ်း မိန်းကလေးအများစု လိုချင်တဲ့ချစ်သူမျိုးက ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ပါစေ .. ကိုယ့်ကို လက်လွှတ်မသွားတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးပါ ..။ “မင်းစိတ်ချမ်းသာသလို ဆုံးဖြတ်ပါ .. ထားသွားလည်းကိစ္စမရှိပါဘူး” “ငါနဲ့ဝေးသွားရင် မင်းဘ၀ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ ဝေးသွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှမခံစားရဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားလုံးတွေထက် “မင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်” ဆိုတဲ့ စကားတွေကို မျှော်လင့်တတ်ကြတာပါ ..။
တကယ်တမ်းအချစ်စစ်စစ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် .. ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ အခြေအနေတစ်ခုရောက်အောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ...။ ဘယ်လိုအခက်အခဲ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံလာရပေမယ့် .. relationship ကို တည်မြဲအောင် ကြိုးစားကြမှာပါပဲ ..။ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တကယ်မချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ ..။ ချစ်သူတွေကြားထဲ ခဏတဖြုတ် စကားများ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြရင်တောင်မှပဲ လမ်းခွဲမယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား အခြားစကားလုံးတွေနဲ့ပဲ စကားနိုင်လုကြရင်း မူရင်းအခြေအနေရောက်အောင် ဖြေရှင်းသွားကြတာမျိုးက ချစ်တတ်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ ..။ အဲဒါကြောင့် ချစ်သူနှစ်ဦး ခွဲခွာကြရတယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ဖက်ကတော့ အချစ်မစစ်လို့ပါပဲ ..။ အချစ်စစ်သာမှန်ရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်သူမှ လက်မလွှတ်နိုင်ကြဘဲ ... စွန့်လွှတ်ဖို့ စိတ်ကူးမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး ...။ နှစ်ဦးသားနီးစပ်ဖို့အရေးအတွက် ကြိုးစားကြရင်း relationship ကို ခိုင်မြဲအောင် ကြိုးစားနေကြမှာပါပဲ ..။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနောက်လိုက်ရင်း အချစ်ကိုမေ့ထားကြသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့လေ ....။
Phyu Lwin February 01, 20147Comments
အချိန်တွေ အကုန်မြန်လွန်းတာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ဇန်န၀ါရီ တစ်လတောင် ကုန်ဆုံးသွားပြန်ပြီ ...။ မနေ့က ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်က ကျမရဲ့ မွေးနေ့ ..။ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ညနေပိုင်းမှာတော့ အိမ်မှာပဲ မိသားစုနဲ့ ခွေးတွေ ကြောင်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းဖြစ်တယ် ..။ သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ ခွေးလေး ၂ ကောင်မွေးထားတယ် ..။ ရိုးရိုးခွေးလေး ၁ ကောင် အမွေးစုတ်ဖွား ခွေးဖြူလေး တစ်ကောင်ရယ် ကြောင်က ၅ ကောင် ..။ နောက်များမှ သူတို့အကြောင်း တခမ်းတနား စာရေးဖြစ်အောင် ရေးပါဦးမယ် ...။
၂၀၁၄ နှစ်စပိုင်းကတည်းက ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အိပ်မက်တွေကို အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေအောင် မှတ်တမ်းထင်တဲ့အနေနဲ့ blog မှာ စာစီထားမယ်လို့ စိတ်ကူးဖြစ်ပေမယ့် မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ..။ မနေ့က မွေးနေ့ကို ဖြတ်သန်းပြီးသွားတဲ့အခါ အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာကို ခံစားမိလာတာနဲ့အမျှ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်က ပိုခိုင်မာလာတယ် ...။
After 31th January,,,,
What’s I want?? What’s I expect?? What’s I wanna do??
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း .... ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ်မှာ ရေးထားခဲ့သလို အပြောင်းအလဲကို လက်ခံပြီးသွားပြီ ..။ အလိုက်သင့်နေထိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေရင်း .. အိပ်မက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ ...။
Okay!! ၂၀၁၄ အတွက် ကျမရဲ့ အိပ်မက်တွေ ချရေးကြည့်ပါမယ် ..။ နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ အဲဒီအိပ်မက်တွေအားလုံး အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့မခဲ့ ဒီပို့စ်ကို ပြန်ကြည့်ရင်း ပြန်စစ်လို့ရပါပြီ ..။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပညာရေးပေါ့ ..။ ဒါကလည်း ကျမရဲ့ ၀ါသနာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ ...
ဒီနှစ်အတွင်း Ph.D scholarship တစ်ခုရချင်ပါတယ် ...။ အင်တာနက်သုံးဖြစ်တိုင်း ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုဒ်တွေက scholarship နဲ့ဆိုင်တဲ့ website တွေကလည်း အပါအ၀င်ပါပဲ ..။ ဘယ်ဘာသာရပ်နဲ့လည်းဆိုရင် Social science နဲ့ လျှောက်ချင်တယ် ..။ အထူးသဖြင့် rural development နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနတစ်ခုကို စာတမ်းရေးချင်လို့ပါ ...။ ကြည့်ဖြစ်တိုင်းတွေ့မိတဲ့ offer တော်တော်များများက Master courses တွေအတွက် ဦးစားပေးပြီး ပေးကြတာများတယ် ..။ Doctoral studies အတွက် အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ပေးရတာဆိုတော့ နှစ်နည်းနည်းနဲ့ အရေအတွက်များများပေးလို့ရတဲ့ မာစတာတန်းတွေပဲ ပေးချင်ကြတာမျိုးထင်ပါတယ် ..။ နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ မပြောတော့ပါဘူးနော် ...။ ရောက်ဖြစ်တဲ့အခါ ဒီနေရာမှာ စာရေးရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာလည်းဆိုတာ အားလုံးတွေ့ရမှာပါ ...။
နောက်ပြီးတော့ မိသားစုအရေး ...။
မောင်နှမတွေထဲမှာ သူ့ပညာရေးနဲ့ သူ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ အားလုံး အခြေတကျရှိနေကြပြီဖြစ်ပေမယ့် .. အငယ်ဆုံးမောင်လေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းကမှ ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရပါတယ် ..။ စာဆက်လုပ်ဖို့လည်း ၀ါသနာမပါ .. စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်း လူရည်မလည်ဆိုတော့ သူ့ဘ၀ကို အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်မိတယ် ..။ ဘာလုပ်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာ သေချာမစဉ်းစားတတ်သေးပဲ သူ့အတွက် ပူနေရတယ် ..။ ကျမက ကိုယ့်အတွက်ကိုတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးတတ်ပေမယ့် အခြားသူတစ်ယောက်အတွက်တော့ သင့်လျော်ရာကို လမ်းကြောင်းပေးတတ်သူမဟုတ်ဘူးထင်တယ် ...။ သူ့ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူ၊ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ် ..။သူ့ဘ၀လှပသွားရင် မိဘနှစ်ပါးစလုံး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြမှာမို့ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ...။
ပြီးတော့ အလုပ်အကိုင် ...စီးပွားရေး??
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ပညာရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတော့ ထွေထွေထူးထူးသိပ်မရှိပါဘူး ...။ ပညာဆက်သင်ရင်း သုတေသနတွေလုပ်ရင်း စာတမ်းတွေရေးမယ် ...။ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ပါနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ် ..။ ဒီလောက်ပါပဲ ..။
နောက်တစ်ခုက လူမှုရေး ???
ဟိုးအရင်ကတည်းက သိပြီးသားအပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊ အခုနောက်ပိုင်းမှ သိကျွမ်းလာတဲ့သူအားလုံးနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် နေပါမယ် ..။ တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်နေရတာကို ကြိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပေမယ့် လူဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာနေရတာဆိုတော့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကင်းကွာပြီးမနေဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ် ..။ Email ယဉ်ကျေးမှု၊ Phone ယဉ်ကျေးမှု တွေကို လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ် ....။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ မေးလ်တစ်စောင်ဝင်လာရင် ချက်ချင်း reply လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်၊ စီနီယာ၊ ဂျူနီယာ၊ ဆရာတွေကို တခါတလေဖုန်းနဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့အကျင့်တွေကို ကျင့်သုံးပါမယ် ..စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့ ...။
မနက်ခင်းတိုင်း၊ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ဘုရားရှိခိုး၊ မေတ္တာပို့တဲ့အကျင့်၊ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်၊ သောက်တော်ရေချမ်းဆက်ကပ်တဲ့အကျင့်တွေကို တနေ့မှမပြတ်စေရအောင် သတိထားကြိုးစားပါမယ်။ မိသားစုနဲ့အတူတူ အလှူတွေလုပ်ရင်း ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ် ..။
ပြီးတော့ ကျမရဲ့ ၀ါသနာ ???
၀ါသနာကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း စာရေးတာပါပဲ ..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတုန်း အက်ဆေးတစ်ချို့ ကောင်းကောင်းရေးရင်း မဂ္ဂဇင်းတွေကို ပို့မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဒါက သိပ်တော့ မသေချာပါဘူး .. ကျမ အရည်အသွေးမီအောင် ရေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ..။ အဓိက က အချိန်မပေးနိုင်မှာကြောင့်ပါ ..။ ဒါပေမယ့်လည်း မျှော်လင့်ထားတာကတော့ Blog မှာ အနည်းဆုံး ပို့စ် ၅၀ ပြည့်အောင်တော့ ရေးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ် ..။
အချစ်ရေးတော့ မရေးတော့ပါဘူး :D :D
ပြန်ဖတ်မိရင်း ဒါကို တော်တော်များများ tag post အနေနဲ့ရေးရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးမိတယ် ..။ စာဖတ်သူတွေလဲ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ၂၀၁၄ အတွက် မတူညီတဲ့အိပ်မက်တွေကို ခံစားခွင့်ရရင်း ဘလော့ဂါတွေလည်း ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ရင်း ပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ..။
facebook မှာတော့ မိုးသက်ရယ်၊ အသူရယ်၊ ရိုးမြေကျရယ် ကို ပြောပြီးပါပြီ ..။
ဘလော့မှာတော့ အမြဲလာလည်ပြီး အားပေးတတ်တဲ့ မမစံပယ်၊ မမအိုင်အိုရာ ...
ပြီးတော့ ကျမသိတဲ့ မမိုးငွေ့၊ မပစ်၊ ကန်ဒီ၊ စုမြတ်၊ အန်တီတင့်၊ ဆရာဟန်ကြည်၊ နွေလ
တကယ်တော့ ကျမက blogger တော်တော်များများကို မသိတာကများတယ်ထင်တယ် ..။ အားလုံးလိုလို ရေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲနော် ..။ ဒီပို့စ်ကို လာဖတ်မိတဲ့ blogger သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နောက်ထပ် blogger တွေကို ထပ် tag ပြီး အိပ်မက်ကလေးတွေ ချရေးစေရင် တကယ် ပျော်မိမှာပါ ....။